Echecs U18 : voahosotra ho tompondakan’i Frantsa Rakotomaharo Fy | NewsMada
Echecs U18 : voahosotra ho tompondakan’i Frantsa Rakotomaharo Fy
Nampiaiky. Voahosotra ho tompondakan’i Frantsa, teo amin’ny taranja échecs, sokajy U18 zazalahy, Rakotomaharo Fy. Tsy namelany raha tsy izy no nahazo ny laharana voalohany tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Frantsa notanterahina, ny 10 – 17 avrily teo, tao Gonfreville.
Raha ny fampitam-baovao, tsy nisy nahatohitra an’ity solontena malagasy ity ireo mpifanandrina taminy teo amin’io sokajy nisy azy io. Nampitenenin’i Fy, araka izany, ny fahaiza-manaony eo amin’ny taranja échecs. Noporofoiny ihany koa ny maha laharana voalohany azy aty Afrika eo amin’ny sokajy misy azy, amin’izao fotoana izao.
Teo amin’ny vokatra azony, nahazo ny isa 9/9 i Fy izay nandrombahany ny tompondaka. Voalaza mantsy fa ny “9 rondes” no nilalaovana sy nifaninanana teo amin’iny fiadiana ny tompondakan’i Frantsa iny. Mpilalao 73 no indray nifaninana teo amin’ny sokajy nisy azy. Hiatrika ny “Open international de Madagascar” andiany faharoa indray i Fy, ny 19 – 27 jolay izao.